Chii chinonzi Big Data Analytics? 3 Mabhenefiti uye Zvinetso Zvinosanganisirwa muKuishandisa - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Chii chinonzi Big Data Analytics? 3 Kubatsira uye Zvinetso Zvinosanganisirwa Nekuzvishandisa
guru dhata analytics iko kushandisa maturusi nemaitiro ekuwana nzwisiso kubva kumahombekombe makuru e data. Iyi data ine imwe yeaya matatu maitiro makuru vhoriyamu, yakakwira velocity kana yakanyanyisa kusiyanisa. guru dhata analytics inotarisira kuwana kuwirirana uye mhedziso kubva kudhata iyo yaimbove isinganzwisisike nezvigadzirwa zvechinyakare semaspredishiti. guru dhata analytics inoshandisa maturusi akaita seHadoop, SAS, R nezvimwe izvo zvine simba kudarika akamboita mitsara nemakoramu. guru dhata analytics inoshandisa maturusi aya kuwana mhedzisiro kubva kune ese akarongeka uye asina kurongeka data kupa zvimiro zvaimbove zvatisingakwanise kusvika.
Nekufambira mberi mumatekinoroji, iyo data inowanikwa kumakambani iri kukura pamwero unoshamisa. Iyi dhata inopa mikana yakawanda kumakambani maererano nehurongwa hwekugadzirisa uye kuita. Nekubatsira kweiyo chaiyo nguva yakakura kugadzirisa data, makambani anogona kushandisa dhata kusimudzira kutora sarudzo. guru dhata analytics inogona kubatsira makambani kushandisa dhata kupesvedzera kwete chete sarudzo dzemangwana asi sarudzo dziripo zvakare.
Zvakanaka Read: 10 Big Data Kuona Zvishandiso
Nei Big Data Analytics iri kuwedzera?
Nhasi, huwandu hunofungidzirwa hwedhata hwakaenzana ne1,200 exabytes, yakaenzana nemamirioni gumi nemaviri emamiriyoni egigabytes. Ruzivo irworwo rwakakura zvakakwana kuzadza mirwi mishanu yakaparadzana yemaCD ayo anosvika ese kumwedzi. Nekukwira kwehuwandu hwe data, kune zvakare kukwira mune yekuchengetera kugona. Zvinoenderana neyakareruka, avhareji hard drive kugona yakawedzera kubva pa10 GB muna 2000 kusvika 1TB muna2010.
Nekukwira kwakanyanya kwedata kunouya mikana yekuishandisa. guru dhata analytics inobvumira kushandiswa kweiyi data kuburitsa hukama husingasvikike nemaitiro echinyakare ekuongorora. Huwandu hwemikana uye kuwedzera kwehunyanzvi hwekuongorora huri kuverengera mukukwira uku guru dhata analytics.
3 Makomborero eBig Data Analytics:
1. Kuderedza Mutengo:
Big data inobatsira pakupa bhizimisi hungwaru hunogona kuderedza mari uye kuvandudza kushanda kwekushanda. Maitirwo akaita sevimbiso yemhando uye kuyedzwa anogona kusanganisira akawanda matambudziko kunyanya mumaindasitiri akaita sebiopharmaceuticals uye nanotechnologies. guru dhata analytics inogona kupa ruzivo pamusoro pemabatiro ezvakasiyana zvakasiyana mukuita kwekugadzira nokudaro zvichibatsira maindasitiri kutora sarudzo dziri nani.
2. Yakagadziridzwa Sarudzo Kutora:
guru dhata analytics inogona kuongorora data yapfuura kuita fungidziro nezveramangwana. Saka mabhizinesi haangogone kuita zvirinani zvazvino sarudzo asi zvakare kugadzirira ramangwana. Izvi zvinovapa mukana wekukwikwidza uye zvinopa imwe agile sisitimu yekuita sarudzo uye kubata njodzi.
3. Zvitsva Zvigadzirwa neMasevhisi:
Mabhizinesi anogona kuongorora yapfuura data nezve kutangwa kwechigadzirwa uye mhinduro dzevatengi kuti vatange zvirinani zvigadzirwa mune ramangwana. Pamwe chete neizvi, nguva chaiyo yekuongorora misika inobvumira bhizimisi kunzwisisa kuchinja kwekuda uye kugovera kwezvigadzirwa uye shanduko mumaitiro evatengi ayo anobatsira mukushambadzira kwakanangana nevatengi. Kuwedzera kudiwa kwemasevhisi emunhu anogona zvakare kupihwa simba nekuongorora zvinodiwa nevatengi, zvaunofarira uye maitiro ekutenga.
Zvinetso Mukushandisa Big Data Analytics:
Dambudziko guru pakushandisa guru dhata analytics ndeye kugovera data inobatsira kubva kumasumbu. Iyo data inodiwa pakuongorora isanganiswa yezvose zvakarongwa uye zvisina kurongeka data iyo yakaoma kwazvo kunzwisisa. Pamusoro peizvi ndiko kushomeka kwevashandi vane tarenda vane hunyanzvi hwekuita pfungwa kubva kune yakakura data. Kubva pakutsvaga basa kusvika pakudzidziswa uye kubva pakuronga bhajeti kusvika pakuronga, kushandisa guru dhata analytics inouya nevakawanda matambudziko semikana.
Kunyangwe paine zvipingaidzo zvakawanda pamberi pedu, tese takatsunga kupa tekinoroji iyi mukana wainokodzera. Data huru mukukwana kwayo inokwanisa kugadzira shanduko yekuchinja munyika chimwe chinhu chakakura se Indaneti kana kuti zvimwe zvakakura. Kune dzakawanda zviitiko zvekubudirira kwekuita kwedata hombe uye zviitiko zvinogona kukura kubva kumazana kusvika kuzviuru mumakore gumi chete kana zvisiri zvishoma.